ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၃-၈-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၃-၈-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး ဆန္ဒပြသူများ ဖမ်းဆီးခံရ click
- လက်ပံတောင်းအရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ ပြန်လွှတ်ပေးရန် မုံရွာဒေသခံများ ထိုင်သပိတ်ပြုလုပ် click
- အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ကိုထင်ကျော် အပါအဝင် ၄ ဦး တရားရုံးထုတ် (ရုပ်သံ) click
- ဗိုလ်ချုပ်စိုးရှိန် အမှု ရဲတပ်ဖွဲ့ စတင်စစ်ဆေး click
- ၆ ရက်အတွင်း တတိယအကြိမ် ဝန်ကြီးများ ပြောင်းလဲ၊ ခန့်အပ် တာဝန်ပေး click
- အလုပ်လက်မဲ့များအတွက် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးမည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် သမ္မတထံ တင်ပြ click
- ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ ဥပဒေကြမ်း ပြန်သုံးသပ်မည်ဟု ဦးရွှေမန်း ကတိပြု click
- မီဒီယာဥပဒေမူကြမ်းကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆွေးနွေး click
- မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) နှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တွေ့ဆုံ (ရုပ်သံ) click
- ပြန်ကြားရေးနှင့် စာနယ်ဇင်းကောင်စီကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်မည် click
- အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ယနေ့ ဆွေးနွေးမည် click
- လွတ်လပ်သော အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသင့် (ရုပ်သံ) click
- ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်ကို ပမာပြု၍ အလားတူဖြစ်ရပ်များ ထပ်မံမဖြစ်ရန် တောင်းဆို click
- တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီမှ တရားစီရင်ရေးကို တိုင်သည့်စာ အများဆုံးရရှိ (ရုပ်သံ) click
- မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းသူများကို ရဲများ မျက်ကွယ်ပြုနေဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့်ကော်မတီ တွေ့ရှိ click
- တောင်သူလယ်သမားများကွန်ရက်မှ ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ်ရှိ click
- လယ်ယာမြေဥပဒေ ဆိုင်းငံ့ထားပေးရန် ကေအန်ယူ ပြော click
- ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂများ စက်တင်ဘာလတွင် အပြီး ဖွဲ့စည်းမည် click
- လယ်သမားအကျိုးကို မကာကွယ်ပေးတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ကို ၂ဝ၁၅မှာ မဲမပေးဖို့ တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ရန်အတွက် ကော်မတီဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်မည် (ရုပ်သံ) click
- ကင်တားနား ရခိုင်ပြည် ရောက် click
- မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်များကို ကုလကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆုံ click
- လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားကို ဆန္ဒပြ click
- ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားအား ရခိုင်ဒေသခံများ ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော် (ရုပ်သံ) click
- အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတခု ပဋိပက္ခထိန်းချူပ်နည်း လေ့လာရန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးသွားမည် click
- မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲရန် ငွေထောက်ပံ့သည်ဟု မသင်္ကာသူ အင်ဒိုနီးရှားရဲ ဖမ်းဆီး click
- မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးနှင့် အစိုးရ သဘောတူညီချက်များ click
- KNU နှင့် ၈၈ ပွင့်လင်းအဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် click
- အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် TNLA တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ် click
- TNLA တပ်များအား အကြောင်းပြချက်မဲ့ အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ တိုက်ခိုက် click
- ရှမ်းမြောက် KIO နယ်မြေဘက် အစိုးရစစ်အင်အား တိုးမြှင့်မှုရှိ၊ ပလောင်ဒေသဘက် တည်ငြိမ်နေ click
- ဖယ်ဒရယ် တပ်မတော် (Federal Union Army) တရပ် ဖွဲ့စည်းရေး ဆိုရာ၌ .. click
- WGEC က ရေးဆွဲထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရေး မူဘောင်ကို လူထုအား ရှင်းလင်းပြမည် click
- ဒီမိုကရေစီ ကျောက်တိုင် စိုက်ထူပါ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- အင်တာနက်ကြောင့် MPU ကတ်တွေ ATM မှာ ပြဿနာပေါ် click
- သျှမ်းပြည်ဒေသအသီးသီး ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များပြား click
- ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်ချေးသည့် အိုဒီအေချေးငွေများကို ကဏ္ဍသုံးရပ်တွင် အသုံးပြုသွားမည် (ရုပ်သံ) click
- ယခုဘဏ္ဍာနှစ် ၄ လအတွင်း ယခင်နှစ် ၄ လထက် ဒေါ်လာ ၁၃၉ သန်းကျော် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ပိုမိုခဲ့ (ရုပ်သံ) click
- တရားမ၀င် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အခြေအနေ မေးမြန်းချက် click
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဟောင်းများ ဥပဒေအရ အခွန်သက်သာခွင့် ရလိုပါက MIC ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည် (ရုပ်သံ) click
- ရန်ကုန်တွင် နောက်ငါးနှစ်အတွင်း လျှပ်စစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုမြှုပ်နှံနိုင် (ရုပ်သံ) click
- ပြည်တွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုမှာ တယူနစ်လျှင် ၂၂ ကျပ် အရှုံးခံကာ ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ဟု ဆို (ရုပ်သံ) click
- ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တနိုင်ငံလုံးတွင် GSM နှင့် UMTS တသန်း တိုးချဲ့တပ်ဆင်မည် click
- တယ်လီနော်မြန်မာ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေအတွက် Ericsson နှင့် Huawei ကို ရွေးမည်ဟု ဆို (ရုပ်သံ) click
- မန်းရှိ လူမှုရေးအသင်းများ၏ အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ်များကို အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖြန့်ဝေ click
- မူဝါဒပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းက ကားအရောင်းစင်တာများ ရှေ့ဆက်ရန် အခွင့်အလမ်းဖြစ်လာ click
- လာမည့် နှစ်ဆန်းမှ စပြီး ပေါင်းဆန် တန်ချိန် ၅,၀၀၀ ခန့် ဥရောပသို့ လစဉ် တင်ပို့နိုင်မည် click
- ကောက်ပဲသီးနှံများ ဈေးနှိမ်မခံရစေရန် ကျေးလက်အထိ ပေါက်ဈေး ထုတ်ပြန်ပေးရန် စီစဉ် click
- တနင်္သာရီမြို့တွင် အသေးစား ချေးငွေကျပ် သိန်း ၅၀ ထုတ်ချေး click
- နေရာပေးသော်လည်း အိမ်ဆောက်မရ၍ အိမ်ရာအနီး ပြန်လည်နေထိုင်သူများကို ကုမ္ပဏီက တရားစွဲ click
- စေတနာလွန်ကဲမှုဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား တာဝန်မှ ရပ်နားခိုင်းသည့်အပေါ် ဒေသခံများ မကျေနပ် click
- မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းစဉ် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး တဦး အသေဖမ်းမိ click
- ရွှေတိဂုံပေါ်သို့ လက်နက်ယူဆောင်သူ အမှုဖွင့်ခံရ click
- ချွေးမကို တရုတ်တွင် ရောင်းစားသူအား ယောက္ခမက အမှုဖွင့် click
- တရားမ၀င် နေထိုင်မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၉ ဦး မီဇိုရမ်ရဲက ဖမ်းဆီးထောင်ချ click
- ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြုလုပ်ချိန် သက်တမ်းတိုးရန် ထိုင်းအစိုးရ အတည်ပြု click
- ထိုင်းရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ၁ လကြာသည့်တိုင် အလုပ်မရသဖြင့် အခက်ကြုံ click
- ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှုရရှိစေလိုသည့်အကြောင်း ရန်ကုန်တွင် စကားရည်လုပွဲ ကျင်းပ (ရုပ်သံ) click
- တောင်ကြီးလူငယ်များ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူငယ်များနေ့ ကျင်းပ click
- လူငယ်များနေ့မှာ လူငယ်တွေ ဘာလုပ်နိုင်သလဲ (ဆောင်းပါး) click
- မိုးထဲလေထဲတွင် ပြည်သူ့သတင်းစာဆရာတဦး ဆုံးရှုံးရခြင်း (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- မြေ၀သုန်ရေ . . . ဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့ ဧည့်သည်တယောက်ကို ဆီးကြိုပေရော့ (ဆောင်းပါး) click
- ဆရာမောင်ဝံသသို့ ဦးညွတ်ခြင်း (ကာတွန်း) click
- “တို့အမျိုးသားတိုင်းပြည်၏ ပြည်စောင့်ခွေး” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့်အတူ ကဗျာရွတ်ဆိုကြ click
- ဘောလုံးကွင်းမှာ အကြမ်းဖက်သူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ချ အရေးယူပြီ click
- ပဋိပက္ခတွင်ပါသည့် အသင်း၊ ကစားသမားနှင့် နည်းပြများကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် click
- ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာယူ ၂၃ အသင်း၏ ပထမဆုံး လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ် (ရုပ်သံ) click
- ပေကျင်းရှိ ၂၆ ထပ်တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်က ကျောက်တောင်ပုံစံအိမ် ဖြိုဖျက်ပေးရန် ဒေသခံများ တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘိုပဲလ်ဓာတ်ငွေ့ သားကောင်များ၊ တရားမျှတမှုမရှိ၊ မဲဆန္ဒ မရှိ click
- မြောက်ကိုရီးယားက ပြည်တွင်းဖြစ် Arirang အမည်ရှိ စမတ်ဖုန်းတမျိုးကို ထုတ်ဖော်ပြသ (ရုပ်သံ) click
- ကနဦး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များအရ ၀န်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန် အတိုက်အခံတို့ကို ပွတ်ကာသီကာ အနိုင်ရ (ရုပ်သံ) click
- အာရပ်ဆောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီရှေ့ဆက်ခရီး (ဆောင်းပါး) click
- PGA Championship ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျေဆင်ဒက်ဖနာ ဗိုလ်စွဲ (ရုပ်သံ) click
ရန်ကုန်မြို.တွင်း ကျောက်တံတား ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ လသာ၊
လမ္မတော် ၊ စတဲ. မြို.နယ်အသီးသီး လမ်းများ ရဲ.
ပလက်ဖေါင်းများကို အသစ်လဲဖို. ခွာထုတ်တားတာ
လနဲ.ချီနေပြီး ပြန်မခင်းနိုင်သေးဘဲ ပစ်ထားသဖြင်. မိုးရေထဲတွင် ဗွက်ထနေပါပြီ ။
ပြည်သူများမှာပလက်ဖေါင်းများ ဗွက်ထနေသဖြင်. ကားလမ်းပေါ်မှ သွားလာနေကြရပြီး ယာဉ်တိုက်မည်.အန္တရာယ် တိုးပွားနေသည်မှာ
လနှင်.ချီ ရှိနေပါသည် ။
သက်ဆိုင်ရာ သိပြီးဖြစ်သည်ထင်သော်လည်း ထပ်မံသိစေရန်